Ross 'Ultritouch nwere ike inye aka ịjiko ekwentị gị na SmartBoard's PanelBuilder | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Ross 'Ultritouch nwere ike inye aka ịjiko ekwentị gị na SmartBoard's PanelBuilder
Ross 'Ultritouch nwere ike inye aka ịjiko ekwentị gị na SmartBoard's PanelBuilder
Ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ n’ịgba ama ole teknụzụ ahụgogogo, ọkachasị na mpaghara nke smartphones na ngwa okike nke etinyere n’ọrụ n’imepụta ụdị ọdịnaya nke onye na-ekiri ya ga-ahụkarị site na igwefoto ma ọ bụ kọmpụta. Taa, ọmarịcha ọkachamara ọ bụla na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike ịmepụta ọdịnaya a na-ahụ anya dị ịtụnanya site na naanị iji aka dị mfe nke ama, na-eduga n'ịmepụta vidiyo nke nwere ike inye aka n'ịwube ndị na-ege ha ntị. Ross Video na - enye ihe nkiri vidio maka ọtụtụ ijeri ndị na - ahụ maka ụwa niile kwa ụbọchị na njikwa mgbasa ozi kachasị, na nke ha. Ultritouch ndi nlekota oru, ndi oru mgbasa ozi nwere ike iji ekwenti ha meputa ihe nke ha.
Banyere Ross Video
Ross Video na-eme ka usoro nke ndị ọrụ dị mfe na ịmepụta akụkọ na-emetụ n'ahụ, mgbasa ihu igwe / egwuregwu, ihe na-etinye aka maka nyocha egwuregwu egwuregwu, ihe ngosi egwuregwu / egwu egwu, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, ndị omebe iwu, ngwa ụlọ ọrụ, na ihe na-akpali ọdịnaya maka ụlọ ofufe. Ngwọta ụlọ ọrụ ahụ amasịla ndị na-ege ntị na ndị ahịa ahịa nke NBC Sunday Night bọọlụ, Eurosport, BBC World, Google YouTube Space London, na ụlọ China eSports powerhouse VSPN. Ross 'ahịrị ngwaahịa mebere Sitena ihe nkiri, eserese oge a na-ahụ anya, igwefoto, sistemụ igwefoto robot, igwe na-emepụta ihe, sava vidiyo, akụrụngwa na ndị na-akwọ ụgbọ, njikwa mgbasa ozi, usoro akụrụngwa, na ihe omume ndụ.
Ross ' Ultritouch na-arụ ọrụ dị ka ebe njikwa sistemụ arụmọrụ na-arụ ọrụ nke nwere ike ijikwa. Ogwe ahụ bụ 2RU na-enweghị aka ma ọ bụ 4RU rack-mountable touchscreen kwadoro na SmartTouch ™. Nke a na - enyere ya aka ijikọ arụmọrụ ama-dị ka arụmọrụ ya na ikike nrụpụta nke DashBoard's PanelBuilder ™. Ultritouch na-agbakwunye ike rawụta njikwa & nlekota nhọrọ ka Ross VideoUltrix na-emeri onyinye na mgbakwunye na-eto eto nke ngwa ikikere.
The Ultritouch na-enye njikọta dashboard nke nkiti na ogwe aka ya na-ebunye ikike nke ịchịkwa ngwaahịa Ross dịka otu onye ọrụ si eme ugbu a. Akwụkwọ ikikere sọftụwia nhọrọ nke nnabata ga-enyere ndị ọzọ aka na njikwa nke ngwaọrụ na arụ ọrụ arụmọrụ. Ngwaọrụ a na -emekwa ka mkpa onye ọrụ dị na ya ebe enwere ike ịtọ ya ngwa ngwa iji rụọ ngwa ọdịnala, gụnyere rawụta, ọtụtụ elele, na njikwa nhazi mgbama. Ọ bụ isi ikike maka onye ọrụ ime ihe ọ bụla ebe ha nwere ike iji panel ha na ụdị emebere nke ọma.
Enwere ike ịhazi osisi menu na Dashboard ka ejiri ya na-achịkwa ya Ultritouch, ọ na - akwado ngwaọrụ ọ bụla na - eji OGP protocol.
Ihe njiri mara Ross ' Ultritouch -agụnye:
Ọrụ Dị Mfe (Mepụta usoro dị mfe iji interface maka ndị na-arụ ọrụ ma na-agụnye njikwa ndị na-anya ụgbọ elu, ọtụtụ elele, ngwaọrụ nhazi akara na ihe ndị ọzọ site n'otu ala)
Hazie (enwere ike ịhazi vidiyo ya maka mkpa onye ọ bụla na-arụ ọrụ)
Ndị na-adọta mmiri (imizenweta arụmọrụ na ohere dị na paradaịs site na nduku na mgbasawanye nke ndị na-ese mmiri)
Mbido ngwa ngwa (usoro ihe ịga ije na-enye ohere maka nhazi dị mfe na nhazi usoro)
Njikwa Multiviewer (Njikwa nlele maka Ultriscape multiviewers, nke na-enye ohere ka ọ gbanwee ma gbanwee PIP na njiri ihe ngosi iji kwalite iji rụọ ọrụ maka ndị ọrụ)
Agụnyere na Ultritouch bụ DashBoard Connect ™, nke na-enye njikwa nke ndị ọzọ Ross Video ngwaahịa.
Mụta ihe banyere www.rossvideo.com/products-services/infrastructure/routing-systems/ultritouch/.
Ihe Mere Họrọ Ross Video
Ross ' ihe nketa dị ka onye ndu n’ime mmepụta vidiyo na-aga azụ afọ iri abụọ na asatọ, na oge ahụ, ụlọ ọrụ a na-ejide onwe ya na onye nwere onwe ya enwetawo uto na-aga n'ihu. Ross Video nwekwara ụlọ ọrụ nke aka ya, ebe a na-eme nnyocha na mmepe niile na ụlọ. N'ebe ahụ, a na-ere ngwaahịa ya gburugburu ụwa site na ike ahịa ụwa na netwọ nke ndị mmekọ na-azụ ahịa.
Ọkwa ihe ọhụrụ a rụpụtara ọrụ na-aga n'ihu kemgbe 1974 mgbe John Ross hiwere ụlọ ọrụ ahụ. Ọ ga-aga n'ihu maka ọtụtụ ndị okike si ebe ahụ nwere ihe okike iji mepụta ụdị ụlọ ọrụ ọdịnaya vidiyo dị ka Ross Video nwere ike iji dị ka mbanye iji gafere n'ókèala teknụzụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na a panel ngwaọrụ dị ka Ultritouch nwere ike ikwe ka onye ọrụ nweta agwakọta amamịghe nke ekwentị dị ka arụmọrụ, mgbe ahụ ọ ga-ekwe omume ịmụpụta ihe niile bụ naanị oge.
Maka ozi ọzọ na Ross Video, nleta www.rossvideo.com/.
ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị mgbasa ozi ese foto Njikọ DashBoard ™ Osisi menu DashBoard's PanelBuilder ™ dị ka arụmọrụ ama-dị ka ọrụ arụmọrụ John Ross mobile ndụ ihe nke mebere Studio Ndị na-ere ahịa ndịna-emegharị oge usoro igwefoto robotic Ross Video ngwọta amamịghe amamịghe smartphone SmartTouch ™ ogwe njikwa sistemụ Ultritouch Ihe ngosi vidiyo sava vidiyo ọdịnaya anya 2020-04-25
Previous: On-Air Radio alitydị
Osote: Ndi otu ulo ahia